Manni Murtii Tuniiziyaa jilli Israa’el gara biyyattii akka hin seenne uggure - NuuralHudaa
Manni Murtii Tuniiziyaa jilli Israa’el gara biyyattii akka hin seenne uggure
On Nov 4, 2018 11
Foramiin marii Amantaalee addunyaa November 4-8, 2018 Tuniziyaa keessatti kan geggeefamu yoo tahu, jilli Israa’el kora kana irratti hirmaachuudhaaf Viizaa seensaa Tuniiziyaa gaafatee ture. Haa ta’u malee gareewwan mirga namoomaa fi dhaabbiileen walabummaa Falasxiin deeggaran, gaafii Jila Israa’el mormuun dhimmicha gara mana murtii geessanii akka turan gabaasni arganne ni ibsa.
Haaluma kanaan manni murtii Tuniiziyaa Juma’aa dheengaddaa jilli Israa’eel gara biyyattii akka hin seenne uggure. Gareen Hamaas murtii kana gammachuudhaan simate. Dubbii himaan garee Hamaas Saamii Abu Zuhri, “Ummata Tuniiziyaa fi dhaabbiilee Jilli Israa’el gara biyya isaanii akka hin seenneef irratti hojjatan hunda ni galatoomffanna” jedhe.
July 7, 2022 sa;aa 2:01 am Update tahe